Muuqaal Kooban oo Gaar ah oo Ku Saabsan Studio-yaha Mawduuca Rundown | Martech Zone
Muuqaal Kooban oo Gaar ah oo Ka Fiiri Studio-ka Mawduuca Wareega
Khamiis, Janaayo 7, 2016 Khamiis, Janaayo 7, 2016 Douglas Karr
Maanta waxaan leenahay a Martech Zone gaar ah - muuqaalka koowaad ee gudaha Rundown Content Studio!
Rundown waa ururinta qaabab fudud, fudud oo loo adeegsan karo Barnaamijyada aad u adeegsan karto si aad u dhisto Studio Studio ah oo si gaar ah loogu talagalay kooxdaada wax ka kooban iyo sida saxda ah ee kooxdaadu u wada shaqeyso.
Marka ugu horeysa, waxaa muhiim ah in la ogaado in Rundown Apps loo isticmaali karo barnaamijyo kaligood taagan - marka hadaad ubaahantahay jadwalka maadada, waxaa jira barnaamij taas loogu talagalay. Kaliya ma u baahan tahay inaad wax ka qabato oggolaanshaha? Waxaa jira barnaamij sidoo kale. Kaliya ma rabtaa barnaamij si aad u diiwaangeliso oo aad u wadaagto istiraatiijiyaddaada? Waxaa jira barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay taas!
Barnaamijyada 'Rundown Apps' waa xalal fudud oo diiradda saaraya dhibaatooyinka gaarka ah ee soo saarista waxyaabaha ku jira, waxaana loogu talagalay inay fududaato in la isticmaalo oo la awoodi karo - mid kasta waxaa lagu qiimeeyaa $ 20 bishii! Laakiin inta badan ee aad wada isticmaasho, ayaa si fiican u shaqeynaya.
Si ka duwan noocyo badan oo xalal guud ah oo ah kooxaha ka kooban waxyaabaha loo habeeyay soosaarka maaddada, Rundown Apps waxaa si gaar ah loogu talagalay in laga bilaabo xoq si ay u wada shaqeeyaan - markaa halkii aad ka walwali lahayd haddii uu jiro isdhexgal ama uusan jirin, ama sida mid ka mid ah xalkaagu u la shaqeynayo inta ka hartay barnaamijyada wax soo saarkaaga, Rundown Apps waa la shidi karaa oo la xiri karaa hal guji.
Si kasta oo ay u kooban yihiin ama u yaryihiin kooxdaada wax ka kooban, waad kala habeyn kartaa barnaamijyada aad u baahan tahay si aad u dhisto istiraatiijiyadda ku habboon ee kooxdaada. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu qabow ee ku saabsan isticmaalka barnaamijyo fara badan wada jir ayaa ah in inta badan ee aad isticmaaleyso, "caqli" Rundown uu helayo.
Ka dambeeya App kasta oo 'Rundown App' waa qeyb ka mid ah algorithms iyo yutiilitiyada ay ugu yeeraan "MUSE" - Qalabka Warbaahinta iyo Soo Jeedinta Warbaahinta. MUSE wuxuu ka shaqeeyaa daaha gadaashiisa si otomaatig u noqdo howlahaaga jira una soo jeediyo talooyin kaa caawinaya inaad waxyaabaha aad soo saartid si dhakhso leh oo waxtar leh u yeeshaan
MUSE si otomaatig ah ayuu u cusbooneysiiyaa Kalandarka Mawduucaaga, wuxuu kuu sheegayaa goorta ay wax soo daahi doonaan KA HOR intaanay dhab ahaan daahin, waxay soo jeedinaysaa cidda kooxdaada ah inaad wax u qoondeeysid, iyo in ka badan. Asal ahaan, waxay kuu qabataa waxyaabo badan oo adag, caajis adiga ah, markaa waxaad diiradda saari kartaa sameynta waxyaabo aad u wanaagsan.
Isku soo wada duuboo, waxay umuuqataa xalka ugu fiican wakaaladaha, sumadaha soo saara waxyaabo badan, iyo warbaahinta iyo shirkadaha daabacaada. Haddii aad ka badan tahay 5 ama 10 qof oo ku lug leh wax soo saarka maaddada, Rundown waa ikhtiyaar aad uga wanaagsan dhammaan waraaqaha iyo dukumintiyada Google iyo kalandarrada aad maanta la shaqeyn karto.
Saxeex u noqo barnaamijyada 'Rundown Apps' Bilaash!
Waa kuwan qaar ka mid ah shaashadaha shaashadda gaarka ah ee barnaamijyada qaarkood:
Shaashka Wax Soo Saarka Shakhsiga
Fikirka iyo Wada shaqaynta
Tifatiraha Mawduuca Omnichannel
Tags: istuudiyaha maadadahoos u cararTaulbee Jackson
Jan 9, 2016 saacadu markay ahayd 4:17 PM